हनेडा एयरपोर्ट! टोक्यो / अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु टर्मिनलहरू कसरी पुग्ने - Best of Japan
हनेडा एयरपोर्ट दुई प्राथमिक एयरपोर्टहरू मध्ये एक हो जुन ग्रेटर टोक्यो एरिया = शटरस्टकमा सेवा गर्दछ
हनेडा एयरपोर्ट टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्ट हो। तपाईं जापान यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान द्वारा र हनेडा एयरपोर्टबाट प्रस्थान गर्दै। र तपाई हनेडा एयरपोर्ट प्रयोग गरी जापानको वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए यस पृष्ठमा म तपाईंलाई हनेडा एयरपोर्टको बारेमा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु।
हनेडा एयरपोर्ट वा नरिता एयरपोर्ट?
घरेलु टर्मिनल: टर्मिनल १
तपाईं कहाँ जापान रेल पास पाउनुहुन्छ?
टोक्यो (१) टोक्यो मोनोरेलमा Haneda एयरपोर्ट
टोक्योमा हनेडा एयरपोर्ट (२) केिक्यू (केहिन्ह क्युको ट्रेन)
टोकियोमा हनेडा एयरपोर्ट ()) बसहरू
टोक्योमा हनेडा एयरपोर्ट ()) ट्याक्सीहरू
रोयल पार्क होटल टोकियो हनेडा (अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल)
हनेडा एक्सेल होटल टोक्यू (डोमेस्टिक टर्मिनल २)
पहिलो केबिन हनेडा टर्मिनल १
हनेडा एयरपोर्ट टोरियोको नरिता एयरपोर्ट भन्दा धेरै नजिक छ
यात्रीहरू लामबद्ध छन् र हनेडा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट = शटरस्टकमा एयरलाइन्स काउन्टरमा चेक इन गर्दै
हान्डे एयरपोर्टको रूपरेखा
हनेडा एयरपोर्ट (आधिकारिक नाम: टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट) टोकियोको दक्षिणपश्चिमी भागमा जापानको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। यो टोक्यो शहरको केन्द्रबाट १ 18 किलोमिटर टाढा छ। यो लगभग -०-30० मिनेट ट्रेन वा कार द्वारा हनेडा एयरपोर्टबाट टोकियो स्टेशनसम्म छ।
हनेडा एयरपोर्ट, नरिता एयरपोर्ट (चिबा प्रान्त) सँगै, टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्टको रूपमा भूमिका खेल्दछ। अहिले सम्म नरिता एयरपोर्ट एक एयरपोर्टको रूपमा विकसित भएको छ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आइपुग्छन् र प्रस्थान गर्छन्। अर्कोतर्फ, हनेडा एयरपोर्ट पूर्ण रूपमा एयरपोर्टको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ जहाँ घरेलु उडानहरू आउँछन् र छुट्छन्। यद्यपि हालसालै हनेडा एयरपोर्ट धेरै विस्तार भएको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन खोलियो। यस तरिकाले, हनेडा एयरपोर्टले विशाल एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्न शुरू गरिसकेको छ कि केवल घरेलु उडानहरू मात्र होईन तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि आउँछन् र छुट्छन्।
हनेडा एयरपोर्टमा तीन यात्री टर्मिनल भवनहरू छन्। एउटा घरेलु लाइन टर्मिनल भवन हो। बाँकी दुई घरेलू टर्मिनल भवनहरू छन्। यी टर्मिनल भवनहरू नि: शुल्क बसले जडान गरेको छ।
>> हनेडा एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् (अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू)
>> हनेडा एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् (घरेलु उडानहरू)
हनेडा एयरपोर्ट धेरै नजिक र सुविधाजनक छ
जब तपाईं टोकियो जानुहुन्छ, तपाईले कुनलाई हनेडा एयरपोर्ट वा नरिता एयरपोर्ट प्रयोग गर्नु पर्छ?
यदि तपाईंसँग आफ्नो देशको हनेडा / मा एक उडान छ भने, म तपाईंलाई यो प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु।
हनेडा एयरपोर्ट टोकियो केन्द्रीय शहर नरिता एयरपोर्ट भन्दा धेरै नजिक छ। तपाईं सजिलै टोकियो स्टेशन वा Shinagawa स्टेशन जान सक्नुहुन्छ जहाँ Shinkansen प्रस्थान।
यसबाहेक, यदि तपाईं जापानमा हवाईजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने, हनेडा एयरपोर्ट नरिता एयरपोर्टको तुलनामा घरेलु उडानहरूको लागि बढी सुविधाजनक छ।
यद्यपि, हनेडा जाने र जाने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नरिता एयरपोर्टको तुलनामा थोरै छन्। र यो नरिटा एयरपोर्ट उडान भन्दा अलि बढी छ।
नरिता एयरपोर्टको लागि, कृपया तल मेरो लेख हेर्नुहोस्।
नरिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जापानको टोकियोको हनेडा एयरपोर्ट पछाडि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। हनिडा एयरपोर्टको साथ नारीता एयरपोर्ट टोकियो मेट्रोपोलिटन हब एयरपोर्टको रूपमा पूर्ण रूपमा परिचालनमा छ। यदि तपाईं टोकियो मा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईं यी एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यस पृष्ठमा, म नरिता एयरपोर्टको बारेमा परिचय दिनेछु। Narita पछि ...
टोकियो, जापानको नोभेम्बर २,, २०१ Ed मा इडो मार्केट प्लेस। हनेडा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको एक हिस्सा जसले पर्यटक = शटरस्टकका लागि सबै प्रकारका जापानी उत्पादनहरू बेच्छ।
टोकियो, जापानको हनेडा एयरपोर्टमा सजावटका लागि काठको पुल। Haneda एशिया मा तेस्रो व्यस्त हवाई अड्डा र संसारको पाँचौं व्यस्त = शटरस्टक थियो
हनेडा एयरपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल (टर्मिनल)) एक तुलनात्मक रूपमा नयाँ सुविधा हो जुन २०१० मा खोलिएको थियो। यो टर्मिनल २aघण्टा सञ्चालनमा छ, र धेरै पसलहरू २3घण्टा खुला छन्। नि: शुल्क वाइफाइ (HANEDA-FREE-WIFI) अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।फ्लोर सिंहावलोकन
यसलाई क्लिक गर्दा एक अलग पृष्ठमा आधिकारिक साइट फ्लोर नक्शा प्रदर्शन गर्दछ
अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको प्रत्येक फ्लोर निम्न अनुसार छ।
1F: प्रवेश प्लाजा
ट्याक्सी वा बसबाट एयरपोर्ट आउने व्यक्तिहरू यहाँबाट तल झर्छन् र एयरपोर्टमा प्रवेश गर्छन्। त्यहाँ पहिलो तलामा ट्याक्सी स्ट्यान्ड र बस स्टपहरू छन्, तर तपाईं पहिलो तलाबाट सीधा त्यहाँ जान सक्नुहुन्न। कृपया प्रत्येक भुँडी तल जानुहोस् साइन इनको अनुसार दोस्रो तलामा आगमन लबीबाट।
2F: आगमन लोबी
जब तपाईं जापानमा पुग्नुहुनेछ तपाईं यस तलामा आउनुहुनेछ। यस फ्लोरमा टुरिष्ट इन्फर्मेसन सेन्टर, मुद्रा एक्सचेन्ज अफिस, एटीएम, बस टिकट काउन्टर, भाँडा-ए-कार काउन्टर, जेब वाइफाइ भाडा पसल, बिक क्यामेरा (सिमकार्ड बिक्री गर्ने घर उपकरण स्टोर), आदि छन्। बस, कृपया बस टिकट काउन्टरमा टिकट किन्नुहोस् वा टिकट भेन्डि machine मेसिन पहिले। त्यस पछि, कृपया साइन बोर्डको अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्, भ st्या down तल जानुहोस् र बस स्टपमा जानुहोस्।
यस फ्लोरमा मोनोरेल र केइक्यू रेलवे टिकट अफिस र टिकट गेट पनि छन्। मोनोरेलको टिकट ढोका पछाडि JR EAST ट्राभल सेवा केन्द्र छ। यदि तपाईंले जापान रेल पास प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो भाउचर यो केन्द्रमा जापान रेल पासको लागि साट्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाइँ यहाँ जापान रेल पास प्रयोग गरेर JR टिकट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। JR EAST ट्राभल सेवा केन्द्रको खुल्ने समय 6: 45 - 18: 30 हो।
यदि तपाईं हानेडा एयरपोर्टमा घरेलू उडानमा स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ भने, एयरलाइनमा निर्भर गर्दै तपाईं यो भुइँमा चेक इन गर्न सक्नुहुन्छ। विवरणहरूको लागि, कृपया तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने एयरलाइन काउन्टरका स्टाफलाई सोध्नुहोस्।
3F: प्रस्थान लॉबी
जब तपाई जापान छाड्नुहुन्छ तपाईले यस भुँडीमा चेक इन गर्नु पर्छ। यस फ्लोरमा एक मुद्रा विनिमय कार्यालय र एटीएम पनि छ। होटल भवन "द रॉयल पार्क होटल टोकियो हनेडा" को प्रवेशद्वार जुन यस भवनसँग जोडिएको छ यो तलामा पनि छ। होटलको सन्दर्भमा, म यसलाई पछि यस पृष्ठमा परिचय दिनेछु।
त्यहाँ पसल र रेष्टुरेन्टहरू छन्। माथिको फोटोमा देखिएझैं त्यहाँ पुरानो टोकियोको विषयवस्तु भएको एक सडक छ (एडो)। त्यहाँ स्मारिका पसलहरू, ट्राभल सामान स्टोरहरू, इजाकाया (जापानी शैली पब), रामेन रेस्टुरेन्ट, क्याफे, सुविधा स्टोर र यस्तै। त्यहाँ धेरै स्टोरहरू २ 24 घण्टा खुला छन्।
F एफ: टोकियो पप टाउन
चौथो तलामा प्राचीन जापानको मूल विषयवस्तु छ। यसको विपरित, पाँचौं तलामा पप जापानको विषयवस्तु छ। नमस्कार किट्टी र अन्य चरित्रका सामान पसल, विविध सामान स्टोर "डन क्विजोट", तारामंडल क्याफे, रिलक्सन सैलुन र यस्तै। यदि तपाईं यस भवनमा धेरै समय बस्नुहुन्छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईं यहाँ तारामंडलमा जानुहोस्। माथिको नक्शा क्लिक गर्नुहोस् 5th फ्लोरमा फ्लोर नक्शा खोल्नका लागि। जब "तारामंडल" प्रदर्शित हुन्छ, कृपया "विवरणहरू" थिच्नुहोस्।
निम्न एयरलाइन्सहरू निर्धारित उडानहरू सञ्चालन गर्दैछन्। उडानहरू प्राय: परिवर्तन हुन्छन्, त्यसैले भर्खरको जानकारी जाँच गर्नुहोस् जब तपाईं वास्तवमा बोर्डि board गर्नुहुन्छ।
शो: उडानहरूको सूची हेर्न कृपया बटन क्लिक गर्नुहोस्
जापान एयरलाइन्स (JAL): बैk्कक - सुवर्णभूमि, बेइजि - - राजधानी, गुआंगझौ, हो ची मिन्ह सिटी, ह Hongक Kong, लन्डन - हीथ्रो, मनिला, न्यू योर्क - जेएफके, पेरिस - चार्ल्स डी गाउले, सान फ्रान्सिस्को, सियोल - जिम्पो, शंघाई - हq्गकियाओ, शंघाई-पुडोंग, सिंगापुर, ताइपे-सोंगशान
सबै निप्पन एयरवेज (एएनए): बैk्कक - सुवर्णभूमि, बेइजि Cap - क्यापिटल, शिकागो - ओ'हारे, फ्रान्कफर्ट, गुआzhou्झाउ, हनोई, ह Hongक Kong, होनोलुलु, जकार्ता - सोकार्नो हट्टा, क्वालालंपुर - अन्तर्राष्ट्रिय, लन्डन - हीथ्रो, लस एन्जलस, मनिला, म्यूनिख, न्यूयोर्क-जेएफके , पेरिस-चार्ल्स डि गउले, सियोल-जिम्पो, शंघाई-हq्गकियाओ, शंघाई-पुडोंग, सिंगापुर, सिड्नी, ताइपे-सोंगशान, भ्यानकुभर, भियना
एयरएशिया एक्स: क्वालालंपुर-अन्तर्राष्ट्रिय
एयर क्यानाडा: टोरोन्टो-पिअर्सन
एयर चीन: बेइजि-- राजधानी
एयर फ्रान्स: पेरिस-चार्ल्स डी गउले
एयर न्यूजील्याण्ड: अकल्याण्ड
अमेरिकी एयरलाइन्स: लस एन्जलस
एशियाना एयरलाइन्स: सियोल-जिम्पो, सियोल-इनचान
ब्रिटिश एयरवेज: लन्डन-हीथ्रो
क्याथे ड्र्यागन: हङकङ
क्याथे प्रशान्त: हङकङ
चीन एयरलाइन्स: ताइपे-स्यानशान
चीन पूर्वी एयरलाइन्स: शंघाई-हq्गकियाओ, शंघाई-पुडोंग
चीन दक्षिणी एयरलाइन्स: गुआंगजौ
डेल्टा एयर लाइन्स: लस एन्जलस, मिनियापोलिस / सेन्ट पल
ईस्टार जेट: सियोल-इनचान
ईवा एयर: ताइपे-स्यानशान
गरुड इन्डोनेशिया: जकार्ता - Soekarno-Hta
हेनान एयरलाइन्स: बेइजि-- राजधानी
हवाई एयरलाइन्स: होनोलुलु, कैलुआ-कोना
HK एक्सप्रेस: हङकङ
जेजु एयर: सियोल-इनचान
जुन्यायो एयरलाइन्स: शंघाई - पुडोंग
कोरियाली एयर: सियोल-जिम्पो, सियोल-इनचान
लुफ्तान्सा: फ्रान्कफर्ट, म्युनिक
ठीक एयरवेज: टियांजिन
पीच: सियोल-इनचान, शंघाई-पुडोंग, ताइपे-ताओयुआन
फिलिपिन्स एयरलाइन्स: मनिला
कतार एयरवेज: दोहा
शंघाई एयरलाइन्स: शंघाई-हq्गकियाओ, शंघाई-पुडोंग
सिंगापुर एयरलाइन्स: सिंगापुर
वसन्त एयरलाइन्स: शंघाई - पुडोंग
थाई एयरवेज: बैk्कक-सुवर्णभूमि
टियानजिन एयरलाइन्स: टियांजिन
टाइगेरेयर ताइवान: ताइपे-ताओयुआन
संयुक्त एयरलाइन्स: सान फ्रान्सिस्को
भियतनाम एयरलाइन्स: हनोई
हनेडा एयरपोर्टको डोमेस्टिक टर्मिनल मल = शटरस्टक
हनेडा एयरपोर्टमा त्यहाँ दुईवटा घरेलू टर्मिनल भवनहरू छन्। दुबै घरेलू टर्मिनल हनेडा एयरपोर्टमा बिहान 5:०० देखि ११::00० सम्म खुल्ला छन्। नि: शुल्क वाइफाइ (HANEDA-FREE-WIFI) सम्पूर्ण भवनमा घरेलु टर्मिनल भर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
टर्मिनल १ मा, तपाईं जापान एयरलाइन्स (JAL), स्काई मार्क, जापान ट्रान्स ओशन एयरलाइन्स, स्टार फ्लायरको उडानहरूमा बोर्ड गर्न सक्नुहुनेछ।
टर्मिनल १ को उत्तर विंग र दक्षिण वि W्ग छ। नर्थ विंगबाट तपाईं JAL को होक्काइडो, तोहोकु क्षेत्र, Chuu क्षेत्र, Kansai क्षेत्र उडानहरू बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईं स्काई मार्क उडानहरू पनि बोर्ड गर्न सक्नुहुनेछ।
साउथ विingबाट तपाईले उडान उडान गर्न सक्नुहुन्छ JAL को Chugoku क्षेत्र, Shikoku क्षेत्र, Kushu-Okinawa क्षेत्र। र तपाईं जापान ट्रान्स ओशन एयरलाइन्स र स्टार फ्लायर उडानहरूमा बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
डोमेस्टिक टर्मिनल १ को प्रत्येक फ्लोर निम्न अनुसार छ। यो भवनको तेस्रो तल्ला भन्दा केही सानो संरचना छ।
त्यहाँ केिकियु रेलवे र टोक्यो मोनोरेल स्टेशनहरू छन्।
1F: आगमन लोबी
यदि तपाईं जापानको अन्य क्षेत्रबाट टोकियोको लागि विमानबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यस फ्लोरमा आईपुगे पछि आउनुहुनेछ। यहाँ निम्न ठाउँहरू छन्।
बस टिकट काउन्टर / बस टिकट भेन्डि machine मेशीन / एटीएम / पोष्ट अफिस / क्लिनिक / दन्त चिकित्सक / लाउन्ज / होटल / मन्दिर
स्वर्गको सुरक्षाको लागि मन्दिर स्थापना भएको थियो। यो धेरै सानो छ। होटलको सन्दर्भमा, म यसलाई पछि यो पृष्ठमा व्याख्या गर्ने छु।
टर्मिनल बाहिर एक निःशुल्क बस स्टप (अन्य टर्मिनल को लागी) बस स्टेशनहरु र एक ट्याक्सी रैंक छ।
2F: प्रस्थान लॉबी
यस तल्लामा, चेक-इन काउन्टरहरू घरेलू उडानहरू अप लाइनमा। यस बाहेक एटीएम, बच्चाहरू स्पेस, घरपालुवा जनावर काउन्टर र यस्तै अन्य छन्। बच्चाहरू स्पेस यस्तो स्थान हो जहाँ years बर्ष उमेरका बच्चाहरू खेल्न सकिन्छ, यो अचम्मको कुरो हो। यदि बच्चाहरू यहाँ खेले पछि सवारी गर्छन्, तिनीहरू हवाईजहाजमा सुन्न सक्दछन्।
3F: पसल र रेस्टोरन्टहरू
त्यहाँ पसलहरू छन् जस्तै स्टेशनरी, महिलाको लुगा, पुरुषको लुगाहरू, बच्चाहरूको लुगा, गहना, किताब र स्मृति चिन्ह। र त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरू छन्, जस्तै रामेन, जापानीज, चिनियाँ, सुशी र क्याफे।
4F: पसल र रेस्टोरन्टहरू
त्यहाँ जापानो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुका साना पसलहरु छन् जस्तै वाको, ताकाशिमया, दाइमारु इत्यादि। त्यहाँ ब्रुक्स भाइहरू र बुक स्टोरहरू, इटालियन रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू पनि छन्।
त्यहाँ बियर रेस्टुरेन्ट, सोबा र उडोन चाउचाउ रेस्टुरेन्ट, सुशी रेस्टुरेन्ट र यस्तै।
6F: पुनर्संचयन र अवलोकन डेक
प्रेक्षण र बच्चाहरूका लागि अवलोकन डेक लोकप्रिय छन्। त्यहाँ डेकमा स्नैक्स र पेय पदार्थहरू बेच्ने पसलहरू पनि छन्।
आरएफ: अवलोकन डेक
छैठौं फ्लोरबाट माथि जानुहोस्, तपाईं अझ बढि आश्चर्यजनक दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
मेमानबेत्सु, आशिकावा, कुशिरो, ओबिहिरो, सप्पोरो / न्यू चिटोज, हाकोडाटे
अओमोरी, मिसवा, अकिता, यामागाता
नागोया / चुबु, कोमात्सु
ओसाका / इटामी, ओसाका / कन्साई, नानकी शिराहामा
सप्पोरो / न्यू चिटोज, ओसाका / कोबे, फुकुओका, नागासाकी (ओसाका / कोबे मार्फत), कागोशिमा, ओकिनावा / नाहा
ओकायामा, हिरोशिमा, यामागुची उबे, इजुमो
टोकुशिमा, तकमात्सु, मत्सुयामा, कोची
किटक्याशु, फुकुओका, नागासाकी, ओइटा, कुमामोटो, मियाजाकी, कागोशिमा, अमामी, ओकिनावा / नाहा
जापान ट्रान्स ओशन एयरलाइन्स
मियाको, ईशिगाकी, कुमेजिमा (मध्य जुलाई - सेप्टेम्बर मात्र)
बस टिकट काउन्टर / बस टिकट भेन्डि machine मेशीन / एटीएम / सार्वजनिक टेलिफोन / प्रकोप रोकथाम केन्द्र
टर्मिनलको बाहिर स्वतन्त्र बस स्टपहरू (अन्य टर्मिनलमा), बस स्टपहरू र ट्याक्सी स्ट्यान्डहरू छन्।
यस तल्लामा, चेक-इन काउन्टरहरू घरेलू उडानहरू अप लाइनमा। यसका अतिरिक्त एटीएम, बच्चाहरू स्पेस, होटल (हनेडा एक्सेल होटल टोकियु) छन्। बच्चाहरू स्पेस त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ years बर्ष उमेरका बच्चाहरू खेल्न सकिन्छ, यो अचम्मको कुरो हो। तिनीहरू हवाईजहाजमा सुत्न सक्दछन् यदि बच्चाहरू यहाँ खेले पछि सवारी गर्छन्। होटलको सन्दर्भमा, म यसलाई पछि यो पृष्ठमा व्याख्या गर्ने छु।
तेस्रो तल्लामा स्मारिका, स्टेशनरी, महिलाको पोशाक, पुरुषको लुगाहरू, बच्चाहरूको लुगा, गहना र घडिहरू जस्ता पसलहरू छन्। त्यहाँ चिनियाँ, जापानी, याकिनिकु, टेम्पुरा, भियतनामी, टर्की र कोरियाली जस्ता रेस्टुरेन्टहरू पनि छन्। क्याफे र वाइन बारहरू पनि लोकप्रिय छन्।
इटालियन, चिनियाँ, सुशी, टोंकाट्सु जस्ता रेस्टुरेन्टहरू चौथो फ्लोरमा छन्। क्रेडिट कार्ड सदस्यहरूका लागि त्यहाँ एउटा लाउन्ज पनि छ।
5F: पुनर्संचयन र अवलोकन डेक
Floor औं तलामा त्यहाँ अवलोकन डेक फैलिएको छ। र त्यहाँ धेरै क्याफेहरू दृश्य दृश्यका साथ छन्। त्यहाँ जापानी रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् जस्तै टेम्पुरा र इजाकाया (जापानी शैली पट्टी)।
सबै निप्पन एयरवेज (एएनए)
वाककनाई, मोन्बेत्सु, नकशिबेत्सु, कुशिरो, सप्पोरो / न्यू चिटोज, हाकोडाटे
Odate Noshiro, अकिता, Shonai
नागोया / चुबु, तोयामा, कोमात्सु, नोटो
ओसाका / इटामी, ओसाका / कन्साई, ओसाका / कोबे
ओकायामा, हीरोशिमा, इवाकुनी, उबे यामागुची, तोटोरी, योनागो, हागी · इवामी
ताकामात्सु, मत्सुयामा, कोची, टोकुशिमा
फुकुओका, सागा, नागासाकी, ओइटा, कुमामोटो, मियाजाकी, कागोशिमा, ओकिनावा / नाहा, मियाको, ईशिगाकी
मियाजाकी, नागासाकी, ओइटा, कुमामोटो, कागोशिमा
ओसाका / कन्साई, यामागुची उबे
मैले पहिले नै यस पृष्ठको माथि वर्णन गरें, तपाईं JR EAST ट्राभल सेवा केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको दोस्रो तलामा जापान रेल पास प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, छुट्टीको मौसम आदिमा, पर्यटकहरू तपाईको जस्तै जापान रेल पास प्राप्त गर्न यस केन्द्रमा हतार गर्नेछन्। त्यसकारण, यस केन्द्रमा जापान रेल पास प्राप्त गर्न तपाईले एक घण्टा भन्दा बढि लाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो समयको बर्बादी हो। यदि JR EAST ट्राभल सेवा केन्द्र भीड छ भने, तपाईं टोकियोको बीचमा JR स्टेशनमा जापान रेल पास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
जापान आउने विदेशी पर्यटकहरूले जापान रेल पास खरीद गर्न र प्रयोग गर्न सक्दछन्। यदि तपाईंसँग यो पास छ भने, तपाईं मूल रूपमा जेआरको शिन्कानसेन वा नियमित एक्सप्रेस आदिमा सवारी गर्न सक्नुहुनेछ अतिरिक्त शुल्क बाहेक। तपाईं जापान जानु अघि तपाईं आफ्नो देश मा ट्राभल एजेन्सी आदिको साथ जापान रेल पासको लागि भाउचर किन्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, जब तपाईं जापान पुग्नुहुन्छ, तपाईंले जापान रेल पासको लागि आफ्नो भाउचर आदानप्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ। जापान रेल पासको लागि, कृपया तल मेरो लेख हेर्नुहोस्।
>> कृपया जापान रेल पास बारे मेरो लेख हेर्नुहोस्
>> कृपया जापान रेल पासको विनिमय बिन्दुहरूको लागि यहाँ हेर्नुहोस्
टोक्यो मोनोरेल हनेडा एयरपोर्ट लाइन: टोक्यो मोनोरेल हनेडा एयरपोर्ट लाइन, एक मोनोरेल प्रणाली हो जुन हनेडा एयरपोर्टलाई मिनाटोको हमामात्सुचोमा जोड्दछ, टोकियो = शटरस्टक
मूल रूपमा, म तपाईंलाई टोक्यो मोनोरेल प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु हनेडा एयरपोर्टबाट टोक्योको शहरको केन्द्रतिर जब। दुबै अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु टर्मिनलहरूमा मोनोरेल स्टेशनहरू छन्। यो मोनोरेल लगभग प्रत्येक चार मिनेट छुट्छ। यदि तपाईंले हनेडा एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल स्टेशनबाट ननस्टप "हनेडा एक्सप्रेस" लिनुभयो भने, तपाइँ १ama मिनेटमा हमामासुचो स्टेशन पुग्नुहुनेछ। तपाईं Hamamatucho मा JR हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं २० मिनेटमा JR टोक्यो स्टेशन र ib० मिनेटमा शिबुया स्टेशन जान सक्नुहुन्छ।
जे होस्, यदि तपाईं मोनोरेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ट्रेनहरू हामामासुचो स्टेशनमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं पहिलो पटक टोकियो जानुभयो भने, त्यस्तो अवस्थामा, मलाई लाग्छ कि तपाईंको होटेलको नजिकको स्टेशनमा सिधा बस लैजानु राम्रो विचार हो।
>> टोक्यो मोनोरेल को आधिकारिक साइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
केिक्यू मेन लाइन = शटरस्टकको उरागा टर्मिनलको दृश्य
हनेडा एयरपोर्टमा, तपाईं टोकियो मोनोरेल बाहेक केिक्यू रेलवे पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ दुबै अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु टर्मिनलहरूमा केिकियु स्टेशनहरू छन्। यदि केिकियु सुविधाजनक छ तपाईको गन्तव्यमा जाँदा, तपाई यसलाई अझ राम्रो प्रयोग गर्नुहुनेछ।
जे होस्, जब तपाइँ केिकियु ट्रेन लिनुहुन्छ, तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ ट्रेन कहाँ जाँदैछ। केिकियुको ट्रेन केिकियु कामता स्टेशनबाट टोकियो शहरको केन्द्र सम्म जान्छ र योकोहामा उल्टो जान सक्छ। कृपया सावधान रहनुहोस्।
>> केिकियुको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
हनेडा एयरपोर्ट = शटरस्टकबाट बिभिन्न गन्तव्यहरूको लागि बस बोर्डि area क्षेत्रमा बसहरू
माथिको नक्शामा क्लिक गर्नुहोस्, हनेडा एयरपोर्ट आधिकारिक साइटको बस पृष्ठ प्रदर्शित हुनेछ
हनेदा एयरपोर्ट र विभिन्न मुख्य स्टेशनहरू बीच यती धेरै बसहरू छन्। हो, यी बसहरू दुबै अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र डोमेस्टिक टर्मिनलहरूमा रोकिन्छन्।
यदि तपाईं पहिलो पटक टोकियो जानुहुन्छ, वा यदि तपाईंसँग ठूलो सामान छ भने, म यी बसहरू प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। तपाईंले पहिले बस टिकट काउन्टर वा बस टिकट भेन्डि machine मेशिनमा टिकट खरीद गर्नु पर्छ। त्यसो भए बस स्टपमा जानुहोस् र लाइन अप गर्नुहोस्। हनेदा एयरपोर्टमा बस स्टपहरूमा स्टाफहरू छन्, त्यसैले यदि तपाईंसँग केहि छ जुन तपाईं बुझ्नुहुन्न भने, तपाईंले उनीहरूलाई सोध्नु पर्छ।
माथिको नक्शामा क्लिक गर्नुहोस्, हनेडा एयरपोर्ट आधिकारिक साइटको बस पृष्ठ प्रदर्शित हुनेछ। समान पृष्ठ प्रदर्शित हुनेछ यदि तपाईं तल क्लिक गर्नुभयो भने।
>> हनेडा एयरपोर्ट आधिकारिक साइटको बस पृष्ठको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ट्याक्सी यात्रुहरूको लागि प्रतीक्षा गर्दै हनेडा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट = शटरस्टक
ट्याक्सी स्ट्यान्डहरू प्रत्येक टर्मिनल बाहिर छन्। ट्याक्सी भाडा Han००० येनको हनेडा एयरपोर्टबाट टोकियो स्टेशन क्षेत्र र 5,000००० येन बाट सिन्जुकु स्टेशन क्षेत्रमा छ। यद्यपि सडक भीड छ भने यसले अझ बढी लिन्छ।
यस बाहेक, यसको एक्सप्रेसवे शुल्कका लागि करीव १,००० येन खर्च हुन्छ। ट्याक्सी भाडा मध्य रात र बिहान सब भन्दा सामान्य ११०० येन भन्दा बढि हुनेछ।
छविमा क्लिक गर्नुहोस्, रोयल पार्क होटल टोकियो हनेडाको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ
यदि तपाईं बिहान सबेरै हनेडा एयरपोर्टबाट फर्कनुभयो भने, म तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा रोयल पार्क होटल टोकियो हनेडामा बस्न सिफारिस गर्दछु। यस होटेलमा प्रवेशद्वार तेस्रो तल्ला (प्रस्थान लबी) छेउमा छ। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, रोयल पार्क होटल टोकियो हनेडाको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
रोयल पार्क होटल टोकियो हनेडा चार-स्टार ग्रेड हो। म धेरै पटक बसेको छु। अतिथि कोठा अलि साँघुरो छ। जे होस्, यो होटल प्रस्थान लबीको अगाडि अवस्थित छ। बिहान सबेरै छुट्ने क्रममा त्यस्तो सुविधाजनक होटल छैन। प्रस्थानको पूर्वानुमानमा, कृपया अन्तिम रातलाई रमाईलो गर्नुहोस् पसल, रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलहरूमा पबहरू प्रयोग गरेर!
माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, हनेडा एक्सेल होटल टोक्यूको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ
यदि तपाईं बिहान सबेरै हनेडा एयरपोर्टबाट घरेलू उडानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं डोमेस्टिक टर्मिनल २ मा हनेडा एक्सेल होटल टोकियुमा रहन सक्नुहुन्छ। यस होटेलमा प्रवेश द्वार २ को दोस्रो तला (प्रस्थान लबी) टर्मिनल २ मा छ। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्। , Haneda एक्सेल होटल Tokyu को आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठ मा प्रदर्शित छ।
हनेडा एक्सेल होटल टोक्यू एक star स्टार ग्रेडको बारेमा पनि छ। म धेरै रहन्छु। अतिथि कोठा अलि साँघुरो छ। यद्यपि यो होटल घरेलु प्रस्थान लबीको अगाडि अवस्थित छ। बिहान सबेरै छुट्ने क्रममा यो सब भन्दा सुविधाजनक होटेल हो। यदि तपाइँ टर्मिनल १ बाट छुट्ने उडान प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, नि: शुल्क बसमा टर्मिनल १ मा जानुहोस्।
माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, पहिलो केबिनको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ
पहिलो केबिन हनेडा टर्मिनल १ डोमेस्टिक टर्मिनल १ को छेउमा छ। यो क्याप्सूल प्रकारको होटेल हो। टोकियोको बिचमा क्याप्सूल होटेलहरू भन्दा कोठा फराकिलो छ र त्यहाँ गुणस्तरको भावना छ। यद्यपि अन्य क्याप्सुल होटेलहरू जस्तै कोठामा लक छैन। अतिथिहरूले सार्वजनिक स्नान प्रयोग गर्न सक्दछन्। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, पहिलो केबिनको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
होटल दिनको एक घण्टा लगभग १ येनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले धेरै चोटि प्रयोग गरेको छु। रमाईलो छ किनकि यो साधारण होटेल भन्दा फरक छ। यदि तपाईं अझै सम्म जापानी क्याप्सुल होटल मा रहनुभएको छैन भने, कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्!